Toetra saka tanora ... Noti saka
Toa ny omaly vao nody ny saka malalantsika. Tsia, enim-bolana lasa izay ary manomboka mampiseho fihetsika hafa izy. Mitsahatra tsikelikely ny maha alika azy. Na dia tena miala tsiny aza izahay fa mila "manao veloma" amin'ny dingana malemy indrindra amin'ny vadinay, ary raha ny tena izy dia fantatsika rehetra fa tsy hanao izany mihitsy isika ary mbola hitohy hahita azy ireo ho zazakely (sa diso aho? ny saka dia tsy maintsy mandalo ny dingana sarotra indrindra amin'ny fiainany ho tonga Tompon'ny saka.
Mazava ho azy, miresaka momba ny fahatanorana, izay afaka manomboka hatramin'ny enim-bolana, fa amin'ny saka lehibe kokoa toa ny Maine Coons, dia mety hanomboka aoriana kely. Hifarana eo amin'ny herintaona eo ho eo io, ary mandritra izany fotoana izany ny tsy maintsy ataontsika dia mahareta tsara, satria amin'ity dingana ity no hahitantsika izany, ara-bakiteny: manao izay tiany sy ny fotoana itiavany azy.
Kittens amin'ity taona ity dia maniry mafy te-hijery ny tontolony. Izany no nanolorana anao ho zatra mandehana miaraka amin'ny akanjo satria puppy izy. Raha tsy afaka mitondra azy mitsangatsangana ianao dia tena atoro anao ampifanaraho amin'ny saka ny trano; izany hoe: mametraka scratchers amin'ny teboka samihafa amin'ny trano, tavy ary kilalao.
Zatovo mila fanentanana ara-tsaina isan'andro, satria mankaleo eo noho eo. Soa ihany fa misy ny vahaolana amin'izany: miaraka amina kaopy yaourt madio, azonay ampianarina ianao hitady sakafo. Handray sombim-bokatra 10 (hokapaina sakana kely) ohatra isika, ny York ham, ary hosaronantsika ireo kaopy yaourt. Amin'ny voalohany dia hosaronantsika daholo izy ireo, fa rehefa mianatra ny saka dia hampihena ampahany kely sy kely kokoa isika.
Rehefa mikomy ny namantsika dia ny tsara indrindra Mitonia hatrany. Ary, ambonin'izany rehetra izany, raha manana biby bebe kokoa ianao ao an-trano dia tsy tokony hijanona ny "fiarovana" ny toerana ananan'ny tsirairay. Matetika ny saka adolantsento dia maniry ny handray ny toerana (fandriana, seza, ... na inona na inona) saka olon-dehibe, ary ity farany mandany tontolo andro miteny aminy amin'ny fiteny saka "aza mijanona", "aza manao izany ", sns.
Na dia loharanom-pahalalana ho an'ny kely aza ny saka lehibe, dia tsy mila mamela ny fanabeazana ny zaza amin'ny "tanan'izy ireo" isika. Isika no tokony hampianatra azy fa misy fotoana hilalaovana ary misy ny fotoana tony. Amin'ny faharetana sy ny fitiavana no hahatratrarana azy, tena.
1 Ny saka zatovoo sy ny fihetsiny
1.1 Fihetsika vaovao
1.2 Tsy eo ilay zazakely
1.3 Lasa fahavalo ny namana
1.4 Angovo, angovo ary angovo bebe kokoa
2 Alefaso araka ny tokony ho izy ny herinao
3 Fehezo ny fitondran-tena ratsy
4 Aza adino ny momba ny fanaovana spaying na ny neutering
Ny saka zatovoo sy ny fihetsiny
Zava-dehibe ny fahafantaranao ireo fihetsika vaovao hananan'ny saka anao, ny antony hitondrany toy izao sy ny azonao atao momba azy mba hizotra tsara ny zava-drehetra.
Ny anjelinao kely dia hanandrana fihetsika vaovao maro, ary mety tsy tianao daholo izy rehetra. Ny saka tanora dia mety ho lasa matoky tena kokoa ary mitaky be loatra: manandrama mivoaka haingana, mifoha amin'ny 4 maraina, na miakatra ambony latabatra mba hizara sakafo hariva aminao. Na mety hitandrina kokoa izy ireo na tsy handefitra: manohitra ny fikapohana ny hoho na mihazakazaka avy amin'ny mpitatitra. Izany rehetra izany dia mifamatotra ao amin'ny ati-dohanao matotra ary manomboka manontany hoe inona no azo antoka, inona no mandeha ary inona no tsy.
Tsy eo ilay zazakely
Ara-dalàna tanteraka ho an'ny saka tanora ny manao ratsy noho ny tamin'ny saka. Manery ny fetra izy ireo ary manandrana fomba vaovao hifandraisana amin'izao tontolo izao. Inona no nianarany ary izay niaretan'izy ireo ho toy ny zanany dia manidina eny am-baravarankely (amin'izao fotoana izao).
Lasa fahavalo ny namana
Matetika dia mihabe ny fifanolanana eo amin'ny saka monina rehefa mihalehibe ny saka. Ny saka zatovo dia manandrana mamantatra izay toerana sahaza azy ireo ao an-trano rehefa olon-dehibe, saingy mety tsy mandray fanapahan-kevitra tsara indrindra eny an-dalana. Mety hiteraka fifandonana vaovao momba ny enti-manana (toy ny toerana natory manokana), lalao tsy mendrika na fampitahorana mivantana. Tsara ihany koa ny mitadidy ao fa ny saka rehetra dia mety ho mpanentana fa tsy ny zatovo fotsiny.
Angovo, angovo ary angovo bebe kokoa
Ny sakao zatovo anao dia feno angovo tsy fantany izay hatao ary te hahita ny toerany eto amin'izao tontolo izao, tsara indrindra eo an-tampony, mitsapa ny fetra aminao sy amin'ny saka hafa ao an-trano. Mety hidika izany ny fikikisana ny fanaka mba hamela marika hanitra izay mamantatra ilay zavatra ho anao, fanaka hanisy marika ny urine na zavatra hafa noho io antony io ihany, ary hiady amin'ny saka hafa.
Farafaharatsiny farafaharatsiny, hampiseho ny fahaizany ara-batana izy ireo amin'ny fitsambikinana amin'ny toerana avo indrindra ao amin'ny efitrano ary indraindray mandondona ireo kojakoja haingo sasany. Ny sakao zatovo dia eo amin'ny sehatra lehibe eo amin'ny fiainany ary zava-dehibe ny hanampianao azy ireo hamantatra ny fihetsika mety amin'ny tsy mety, araka ny efa nolazainay tetsy ambony, zavatra tsy maintsy ataonao amin'ny faharetana sy fitiavana izany.
Alefaso araka ny tokony ho izy ny herinao
Ho anao sy ny sakafonao mba ho tafavoaka velona amin'ny fahatanorany dia zava-dehibe ny mampita ny heriny amin'ny alàlan'ny kilalao saka, fiofanana amin'ny fikafika ary ny fotoana filalaovana isan'andro. Ny saka dia mila mandany fotoana miaraka aminao, mianatra avy aminao ary ambonin'izany rehetra izany, na dia manana toetra mikomy aza izy dia mila ny fitiavanao sy ny fitiavanao tsy tapaka.
Raha manandrana mampiasa ny faritra amin'ny vatanao ho kilalao izy dia ampitandremo amin'ny rano na rivotra izy ireo, na misioka sy mandehandeha, sahala amin'ireo mpiray tampo aminy fa tsy mety izany. Hamarino tsara fa manana kilalao fifaneraserana be dia be izy ireo izay hampifandray ny ati-dohany ary hanome azy ireo fotoana hihaza, hikolokolo ary hanenjika. Mpisandoka saka lava iray no hanome azy ireo hivoahana sy hikirakira.
Ny fampiofanana trick-and-play dia mampianatra fifehezan-tena ary afaka manampy anao hamily ny sasany amin'ireo fihetsika tsy tianao ireo. Tsy an'ny alika ihany ny fiofanana. Saka maro no mankafy ny fiofanana amin'ny atidoha amin'ny fikafika, ary ny saka sasany aza milalao fakana!
Mila manam-paharetana ianao ary mitazona vazivazy tsara. Ity koa dia handalo, ary indray andro any ianao hifoha hahita ny tenanao miaina miaraka amin'ny saka sy olon-dehibe milamina. Aza rarana anefa izy, ary aza mamely azy satria ratsy fitondran-tena izy. Rehefa mila manitsy ny fihetsika rehetra ianao dia ataovy amin'ny fanajana sy ny fitiavana hatrany izany. mila mianatra aminao ny saka fa aza matahotra anao.
Fehezo ny fitondran-tena ratsy
Andro vitsivitsy dia mety ho toa ady izany, fa ny saka kosa tsy manao ratsy daholo! Tokony ho mailo ianao amin'ny fitondran-tena tianao ary valio izany. Ny saka anao dia mianatra izay mandeha sy izay tsy mandeha, alao antoka fa mianatra ny lesona ilainao izy ireo amin'ny alàlan'ny fanamafisana izay tianao hataon'izy ireo. Alao izy rehefa te ho sakaina izy na hanome azy tsiro miparitaka amin'ny hazo saka mba ho hita. Raha tsy misy sakafo ny kaontera fa ny saka saka indraindray dia misy mahasoa. ny saka anao dia hanapa-kevitra haingana hoe aiza no tiany hipetrahana.
Aza adino ny momba ny fanaovana spaying na ny neutering
Ny fahatanorana koa dia fotoana ahatongavan'ny zanak'ondrinao ho fahamatorana ara-nofo. Sarotra ny maka sary an-tsaina, fa ny sakafonao kely dia mety ho vonona ny hanana zanany vavy manokana na mandray anjara amin'ny fizotran'ny fiompiana raha vao 5 na 6 volana fotsiny izy ireo.
Raha mikiakiaka tampoka sy mihodinkodina amin'ny hafanam-po ny zanak'akanjo vavy, dia niditra tamin'ny hafanana izy. Ity fampijaliana mahavaky fo ity dia dingana iray, matetika maharitra herinandro eo ho eo, mandritra izany fotoana izany dia mila afatanao soa aman-tsara izy toy ny hoe tany Alcatraz izy mba tsy hisy saka lahy afaka mihaino ny fiantsoany..
Rehefa afaka izany, dia azonao atao sterilized izy, mba tsy hisy aminao intsony hanana izany. Mba hanafoanana ny mety hidiran'ny saka anao zotom-pony ary mampihena ny fitondran-tena tsy ilaina, toy ny fanamarihana ny mony (izay mety ho an'ny lahy sy ny vavy), ataovy ny sakafonao voadio raha vantany vao manoro hevitra azy ny mpitsabo. Azoko atao aminao mihitsy aza ny manome azy io anao rehefa 4 volana ny saka saka.
Mety ho toa vao maraina izy io, saingy fandidiana mora izany amin'io lehilahy io. Ny kitapo dia sitrana haingana, betsaka noho ny saka tranainy izay mandalo fomba fitsaboana spay / neuter. Ny saka vavy anao dia tsy hiaina ny fahasosorana amin'ny hafanana tsy misy valiny intsony, ary Ny saka lahy lahy tanora dia tsy haneho firy ny fihetsiky ny saka eo amin'ny faritry ny mandresy.
Ny zava-dehibe ambonin'ny zava-drehetra dia ny mankafy an'ity dingana tsara tarehy ity, izay ianaran'ny saka anao, nefa koa manamafy ny fifamatorana aminao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » Fiompiana saka » Ny fitondran-tenan'ilay zana-koditry ny tanora